Biography of artist Mukesh Mall ~ Lalit Kala Sangam
Biography of artist Mukesh Mall
Birendra Kumar Rajbanshi
Artist Mukesh Malla
स्कुल अवस्थादेखि नै कलाको क्रियाकलापमा संलग्न, कलाको सिर्जना, कला प्रर्दशनी ,हस्त लिखित पत्रिका, नाटक, नाँच आदिमा संलग्न, जन्मस्थान धनकुटामा । सायद म नौ कक्षामा पढ्दैथे होला ( २०२४ साल तिर ) पहिलो एकल कला प्रदर्शनी, गरेको थिए आफ्नै घरको ठूलो कोठामा । अहिले पनि याद छ हाम्रो घरको माथिल्लो कोठामा वस्नहुने दण्डपानी भन्ने एक व्यक्ति, उनी कुनै एक अफिसको हाकिम हुनुहुन्थ्यो, उनैलाई वोलाएर प्रदर्शनीको उद्घाटन गरिएको थियो । यो कसरी गरियो केही थाहा छैन किनकि यसप्रकारको कला प्रदर्शनी मैले कहिले पनि देखेको थिएन । यसवखत सम्म कुनै कला देखेको पनि थिइन र कुनै कलाकारलाई भेटेको पनि थिइन ।
केटाकेटीकै अवस्थामा म मेरो भाइ अशेष मल्ल र वि.स. २०२० साल देखि करिव ०२४ साल सम्म सेतो कागजमा चित्र वनाउने र प्रदर्शन गर्ने गरिन्थ्यो । हस्त लिखित पत्रिका निकाल्ने गरिन्थ्यो । फुलिस्केप कागजमा कथा, कविता लेख्ने काम चाहि कवि, कथाकार आदीको हुन्थ्यो । संकलन गर्ने सम्पादन गर्नेकाम चाहि अशेषले गर्ने गर्दथ्यो । यस्लौ धेरै कपि वनाउन लेख्ने र भित्र चित्र वनाउने काम चाहि मेरो हुन्थ्यो । महाभारत, रामायणको नाटक गरिन्थ्यो जस्मा मैले चाहि नाटक खेलेको थाहा छैन । तर श्रीपेज आदी वनाउने जिम्मा चाहि मेरो हुन्थ्यो । ठूलो कार्टुन वक्समा भित्र पेट्र्रोम्याक्स राखि पातलो प्लास्टिकलाई रिल वनाइ यसैमा चित्रहरू वनाएर छरछिमेकका मान्छेलाई वोलाएर सिनेमा देखाउने जिम्मा मेरो थियो । यसवेला टुडिखेलमा त्यतिवेलाको आमा, हिजोआज भोली जस्ता सिनेमा देखाइन्थो । हामीले देखेको सिनेमा भनेको त्यही नै थियो । त्यसवखत धनकुटामा विजुलि वत्ती थिएन । गाडि पुगेको थिएन । मैले विजुलि वत्ति र गाडि म एस एलसि पास गरेर धरान आएपछि मात्र देखेको हुँ । त्यतिवेला म १६ वर्षको थिए । अर्थात १६ वर्षसम्म मैलै विजुलिवत्ती र गाडि देखेकै थिइन । धनकुटामा त्यसवखत जात्रामा हरेक घर घरमागइ ठूलो समूहबीच नाच्ने परम्परा थिथो । हरेक टोल टोलको अलग अलग यस्ता समूह हुन्थ्यो । हाम्रो टोलको नाम चाहि तल्लोकोप्चे हो । मचाँहि केटिको लुगा लगाएर नाच्ने गर्दथे । रातभरी जस्तो नाँच हुन्थ्यो । नाँचको बीच बीचमा नाटक, प्रहसन हुन्थ्यो जुन चाहि मेरो भाइ अशेषले गर्दथ्यो । राती ७ आठ वजे शुरु भएर रातभरी नाच्ने काम हुन्थ्यो । नाँचे वापत हामीलाई , जुत्ता , लुगा पैसा दिने चलन थियो । विभिन्न वाजा वजाएर हरेक घर अगाडि गरिने यस्ता नाँचमा हरेक घरबाट पैसा उठाइन्थ्यो । धनकुटामा स्कुले शिक्षा लिएर २०२५मा एस एल सि गरिसकेपछि म चाहि कलेज पढ्न विराटरनगर आए । अलि ठूलो एक मात्र डिप्लोमा सम्म पढाइ हुने अलिकता राम्रो कलेज विराटनगरमा मात्र थियो । वरिपरिका सबै जसो जिल्लाका केटा केटी यसै कलेजमा पढ्न आउथ्यो । विराटनगरमा पनि यही मात्र एक कलेज थियो । त्यसवखत आफू खुसी विषय लिन पाइदैनथ्यो । जुन विषयमा टिचर उपलब्ध हुन्थ्यो त्यसैमा मात्र कक्षा हुने र त्यही विषय लिन पर्ने हुन्थ्यो । यसैले मैले पहिला त काउण्न्टरमा उपलब्ध फर्म लिएर आए । त्यो आइ. एको रहेछ । घरमा वाजेले व्यापार गर्ने हँुदा यो विषय पढ्न हुदैन भन्यो र भोलि पल्ट कमर्सको फर्म लिएर आए । यो दुवै चाहि त्यवखत पढ्न पाइन्थ्यो । अधिकांस टिचरहरू भारतबाट आउने र हिन्दीमा पढाइ हुन्थ्यो म पहाडबाट आएको हिन्दी त के वुझ्थे तर पछि विस्तारै विस्तारै वुझ्न करै लाग्यो ।
म आफुमा होस सम्हालेपछि कला सिर्जना गर्ने रहर जागेको हो यसर्थ पे्ररणाको सन्दर्भमा मेरो अन्र्तआत्माले मलाई अह्राए अनुसार म आफु कला सिर्जनामा समर्पीत हुँदै आएको महसूस गर्दै आएको छु । कलाको खोजीमा म धनकुटामा जन्मे पनि धरान अनि विराटनगर अनि अहिले काठमाडांै आएर वसेको छु यो मेरो कलाखोजिको यात्रा कसैको प्रेरणाबाट भएका ठान्दिन ।
Click on the link below for more information about the artist.